Castle Lager Premier Soccer League yadzinga Makepekepe muChibuku Super Cup mushure mekunge maGreen Machine aonekwa aine mhosva yekukonzera mhirizhonga yakaita kuti mutambo wavo neShabanie Mine ugumire munzira kuMaglas Stadium musi wa 8 Gumiguru.
Kunyange hazvo nyaya iyi yakatongwa musi weChipiri, gwaro rabva kumutauriri wePremier Soccer League, Muzvare Kudzai Bare, rinoti mutambo uyu wapihwa Shabanie Mine nezvibodzwa 3-0 uyezve MaGreen Machine aripiswa mari inoita iyo zviuru zviviri zvemadhora zvichitevera mhirizhonga yakaitwa nevatsigiri vavo.
Shabanie Mine yave kusangana neHow Mine mumutambo wekutanga yemiviri iyo ichatambirwa munhandare yeBarbourfields Stadium neSvondo, uchizoteverwa neuyo pakati peBulawayo City neHarare City.
Premier Soccer League yaronga kuti mitambo iyi itambwe zuva rimwe chete, munhandare imwe chete, kuitira kukwezva chaunga sezvo zvikwata zvasara mumakwikwi aya zvisina vateveri vakawanda.
Mukuru wekumahofisi eHow Mine, VaJohn Makoni, havasi kutya Shabanie Mine vachiti ivo chikwata chekuZvishavane ichi inzira yerwendo rwavo rwekuenda kunotora mukombe mukuru uyu.
Pazvikwata zvasara, Harare City ndiyo yakambotora mukombe uyu muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufainari muna 2014 apo yakarohwa ne FC Platinum nemapenareti.
Mutauriri weHarare City, VaHope Chizuzu, vati vari kufara zvikuru nekusangana neBulawayo City neSvondo sezvo vane ruzivo rwakadzama nezvechikwata ichi.
Vachatora mukombe uyu vachapihwa mari inoita iyo zviuru makumi mashanu, nezvishanu zvemadhora, uyezve vachawana mukana wekumirira nyika muCaf Confederation Cup.
Gore rapera, mukombe uyu wakatorwa neNgezi Platinum Stars.
Totarisa English Premier League.
Zvikwata zvemuguta reManchester, zveMan City neMan United, zviri kutarisira kuenderera mberi nekurura kwazvo apo zviri kudzoka muEnglish Premiership zvichibva mukukunda mumakwikwi eUefa Champions League.
Man City, iyo yakadambura Napoli yekuItaly 2-1, iri kutarisira kuwedzera Burnley pazvikwata zvayadambura mwaka uno apo zvikwata zviviri izvi zviri kusangana muEtihad Stadium neMugovera.
Man City haisati yamborohwa kubvira makundano eEnglish Premier League atanga zvekuti vashoma varikutarisira kuti Burnley ingamise chitima ichi kunyanya panguva ino apo varikukanda zvibodzwa pamadiro.
Pari zvino Man City iri pamusoro peMan U nemapoinzi maviri asi zviri kuratidza kuti mapoinzi ayo vari pamusoro angangowedzereka sezvo Man U ine mutambo wakaoma zvikuru apo iri kushanya kuHuddersfield uko kusiri nyore kutora mapoinzi ese matatu.
Tottenham, iyo iri pachinhanho chechitatu, uyezve yakanorwa semvumba apo yakanoita mangange 1-1 neReal Madrid kuSantiego Benabeu, iri pamusha asi mutambo wayo hausi nyore sezvo iri kusangana neLiverpool iyo yakanozvambura Maribor 7-0 mumutambo weChampions League.
Stoke v Burnemouth